Ahoana ny fomba hampihenana tsara ny tratra?
Ny renim-pianakaviana rehetra dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny zaza tsy ampy taona. Saingy na ho ela na ho haingana dia tonga ny fotoana rehefa nisintaka ny tratran'ny zaza, dia mety hanontany tena ny amin'izay tokony hataony mba hampitsaharana ny famokarana ronono. Hatreto, noho io tanjona io dia nihanify ny vatana mangatsiaka, amin'izao fotoana izao ny olona sasany dia mampiasa io fomba io. Saingy amin'izao fotoana izao dia misy fomba maro hafa. Raha mbola nanapa-kevitra ny hitondra ny tratra ny reny mba hamoy ny ronono, dia mila mahafantatra ny fomba hanaovana izany tsara izy.
Mba hitarihana ity dingana ity dia mila mpanampy ianao, ohatra, ny reny, ny lehilahy na ny sipany. Ilaina ihany koa ny manomana lamba kofehy matevina, tapa-taratasy iray hatao, amin'ny tranga faran'izay henjana, azonao atao ny mampiasa lamba famaohana. Mampiasà fehin-kibo ho an'ny tratra avy amin'ny tandroka sy any amin'ny taolam-paty ambany, raha toa kosa ny fitaovana tokony hifanaraka amin'ny hoditra. Ny tazo dia afatotra ao ambadiky ny ratsan-tongotra miaraka amina kofehy mafy, fa ny reny dia tsy mahatsapa fanaintainana na tsy fahampiana.
Ireo izay liana amin'ny fomba hanamafisana ny tratra mba handoro ny ronono, dia manahy koa rehefa tsara kokoa ny manao izany. Inoana fa tsara ny manao ny dingana voalohany amin'ny alina, ary amin'ny maraina dia azonao atao ny manaisotra ny fandevenana sy manondraka ny ronono . Zava-dehibe ny fanatanterahana ny fanodikodinana raha tsy efa nesorina ny nono.
Ilaina ny maneho ilay ronono, na dia tsy tanteraka tanteraka aza, mba hisorohana ny fihanaky azy, mastitis . Tsy manoro hevitra ny mpitsabo matihanina sasany amin'ny fampiasana kapaotina ho an'ny vatana, fa mba hanatanterahana ny fomba fitsaboana.
Sarotra ny milaza tsara ny fotoana handehanana miaraka amin'ny tratra mafy. Amin'ny ankapobeny dia miharitra hatramin'ny 10 andro io dingana io, saingy tsy ilaina ny mandeha amin'ny famantaranandro toy izany.
Mba tsy hananana ronono dia zava-dehibe ny tsy mahafantatra fotsiny ny fanamafisana ny tratra, fa koa mba handinihana ny nuance hafa. Afaka manome torohevitra toy izany ianao izay hanatsara ny dingana:
mametra kely ny fampiasana zava-pisotro;
tsy salohy, mamy;
Aza misalasala mandritra ny vanim-potoanan'ny firaisana ara-nofo.
Mba hahatratrarana ny fametrahana ny famokarana ronono vao haingana, azo atao ny mameno fanasana eo amin'ny tratra avy amin'ny ravina karaoty.
Raha misy vehivavy mahatsapa fanaintainana, miondrika amin'ny tombo-kisoa kely dia tokony hifantina dokotera izy. Amin'ny ankapobeny, maro amin'ireo mpanolotsaina momba ny hepatita B no manohitra ny tazom-baravarana ary voatery atao raha tsy azo atao izany. Saingy maro ireo vehivavy no nanakana ny fametavetana, noho io fomba manokana io. Miankina amin'ny mummia maoderina hanaraka ity fomba fitsaboana ity - dia ho azy izany.
Lefona katsaka miaraka amin'ny mastitis
Miantsoantso rehefa mihinana
Afaka mihinana apples amin'ny reninao ve ianao?
Chicory mandritra ny fampinono
Azo atao ve ny mambabo ny renim-pianakaviana, amin'ny endriny inona ary tsara kokoa ny mihinana izany?
Azo atao ve ny mamono ny reniny?
Security Corner any am-pianarana
Mandreraka ny soroka
Ny soritr'aretin'i Melanoma
Tahaka ny fahantran'ny alika: sary an-tsary tena mampalahelo sy malahelo!
Andro iraisam-pirenena ho famonoan-tena
Hatena amin'ny fanjaitra mitongilana sofina
Ahoana ny fomba hanaovana mofo amin'ny kapaoty?
Sandals 2017 - inona no modely ho an'ity fahavaratra ity?
Albuman'ny Dembelsky amin'ny tànana manokana
Sakamalao vita amin'ny akoho
Mandeha amin'ny biriky ski
Aleo manasa ankizy?
Brad Pitt dia nanolotra tamim-panajana ny alikaola sy ny zava-mahadomelina
Plum liqueur ao an-trano
Ahoana ny fomba hakana an'i De Nol?